मेरो उम्मेद्वारी समग्र विराटनगरको विकासका लागि
न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७४ जेठ १७ बुधबार |
दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा मोरङमा चुनावी चलहपहल बढेको छ । मोरङको विराटनगर ऐतिहासिक शहर पनि भएकोले यो क्षेत्रको निर्वाचनमा धेरैको ध्यानाकर्षण भएको छ । विराटनगर वडा नं. २ बाट वडाध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिन लाग्नु भएका युवा ब्यवसायी महेश बाहेतीले वडाको विकासमा दिर्घकालिन योजना नै अघि सार्नुभएको छ । उक्त विषयमा उहाँसँग गरिएको कुराकानीको संक्षेपः
तपाईले विराटनगर २ नं. वडा बाट उम्मेद्वारी दिने तयारी गर्नुको कारण के हो ?
ऐतिहासिक विराटनगर नगरको २ नं. वडाको सामाजिक, आर्थिक विकास गर्नका लागि मैले १० वर्षको कार्य योजना नै बनाएर लागेको छु । मेरो उम्मेद्वारी भनेको समग्र वडाको विकास यहाँका जनताको चाहना अनुसार हुनेछ । म कुनै पार्टीगत रुपमा उम्मेद्वारी दिने भन्दा पनि मेरो एजेण्डा र विकास तथा कार्य योजना प्रति सहमत हुने पार्टीबाट उठ्ने छु ।
२ नं. वडाका समस्याहरु के के देख्नु भएको छ ?
यहाँको मुख्य समस्या भनेको सडक, ढल खानेपानी जस्ता विकासका सामान्य पूर्वाधार पनि छैनन् । २० वर्षसम्म जनप्रतिनिधी नभएको अवस्थामा स्थानीय जनताले विकासका पूर्वाधार पाउन सकेका छैनन् । विराटनगर जस्तो ऐतिहासिक शहर भएरपनि यो क्षेत्र पछाडी परेको छ । भने, वडागत रुपमा सरकारले गर्नुपर्ने धेरै कामहरु अलपत्र छन् ।
तपाईले यो वडाको समग्र विकासका लागि के कस्ता योजना सोच्नु भएको छ ?
म यहि वडामा जन्मिएँ, यहिँ हुर्किएँ । यस हिसाबले यो क्षेत्रको मुख्य समस्या केके छन् त्यसलाई राम्ररी नियालेको छु । यहाँका जनता के चाहन्छन् त्यो पनि बुझेको छु । अहिलेसम्म हामीले देश विकास गर्न राजनीतिक दल चाहिन्छ भन्ने बुझ्यौं ।
तर, स्थानीय क्षेत्रको विकासका लागि स्थानीय ब्यक्ति नै लाग्नुपर्दछ । हाम्रा सानादेखि ठूला समस्या हल गर्न यहाँको हरेक घरपरिवारको अवस्था बुझेको, शिक्षित ब्यक्तिलाई स्थानीय निकायमा ल्याउन सक्यौं भने विकास हुन सक्छ । यसका लागि मैले १० का लागि दिर्घकालिन र अल्पकालिन योजना नै बनाएको छु ।
तपाईको उम्मेद्वारी कुनै दल विशेषबाट हुन्छ की स्वतन्त्र रुपमा ?
यो स्थानीय निकायको निर्वाचन भएकोले हामीले कुनै दलको एजेण्डाबाट प्रभावित भएर भोट हाल्नु हुन्न । हामीसँग जो नजिक हुन्छन् । हाम्रो वडाका समस्या जसले हल गर्ने प्रतिबद्धता गर्छन् त्यस्ता ब्यक्तिलाई हेरेर भोट हाल्ने हो । जहाँसम्म मेरो उम्मेद्वारीको कुरा छ । मेरा आफ्नै एजेण्डा भएकाले कुनै दलको एजेण्डा बोन्न जान्न । मेरो एजेण्डामा जुन दल सहमत भएर आउँछ त्यो सँग सहकार्य हुन्छ ।
२ नं. वडाका मतदाताको भनाई चाहिँ के रहेको छ ?
यहाँका जनताको विचार पनि दल भन्दा पनि ब्यक्तिलाई हेर्ने भन्ने नै छ । त्यहि भएरपनि मलाई उम्मेद्वारी दिनुपर्छ भन्ने दवाव छ । मेरो भनाई पनि हाम्रालाई हैन राम्रालाई भोट दिउँ भन्ने छ । जो सँग भिजन छ, शिक्षित छ, जसले स्थानीय जनताको आवाज बोक्न सक्छ त्यस्ता ब्यक्तिलाई नै चुन्नुपर्छ भन्ने छ ।
अन्तमा, तपाईका मतदातालाई के भन्नु हुन्छ ?
विशेष गरी यो क्षेत्रका मतदाताले मलाई यसपटक अध्यक्षमा उठ्नुपर्छ भनेर नै साथ र सहयोग गर्नुभएको छ । यो वडाका लागि मात्र हैन समग्र विराटनगरको विकासका लागि मेरो उम्मद्वारी हुनेछ भन्ने आम मतदातामा जानकारी गराउँछु ।
सरकारमा बसेका मान्छेहरु दलाल पुँजीवादका कारिन्दा हुन् : धर्मेन्द्र वास्तोला, स्थायी समिति सदस्य- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
रेल रित्तै आउने हो कि? हावाको भरमा सबै टिप्पणी गर्न सकिदैन